Tupolev Tu-144D Aeroflot DOWNLOAD FSX & FSX-Steam - Rikoooo
အရွယ် 83.8 ကို MB
downloads ရယူရန္ 23 138
သောမတ်စ်ရုသ, Claudio Mussner, Nikita Konstantinov နဲ့ Mikhail Mitin က Igor Borozdin, Frion
01 / 05 / 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : Installer ဗားရှင်း 10.5
(Concorde တူ) ကိုဒဏ္ဍာရီ Tupolev Tu-144D များအတွက် FSX နှင့် FSX ရေနွေးငွေ့နှင့် Prepar3D v1,2,3 (သဟဇာတမ v4) ။ ရုရှား add-on FS2004 အတွက်လုပ်ထားတဲ့အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးသော။ ဒီဗူးမှာတရားဝင်အရာရှိများနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိစေရန်နှင့်တည်ငြိမ်စေရန်ပြုလုပ်ပေးပါတယ် FSX.
ဒီအရည်အသွေးမြင့် add-on နာရီပေါင်းများစွာသင်ယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ သင်အောင်မြင်မှုရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူပြုပါကအောင်မြင်မှုရရှိပါကလေယာဉ်မောင်းနှင်မှုသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဖိုရမ်.
သင်တန်း၏, ပျံသန်းဖို့ဆိုကြိုးပမ်းမှုမပြုမီ သငျသညျမှာအနည်းဆုံးရုရှားအတွက်လက်စွဲကြည့် ယူ. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားသောရမယ် Google Translate နှင့်အတူ Rikoooo ရုရှားဘာသာစကားထက်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေဘို့, ကခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။
သင်ဤလေယာဉ်နှင့်အတူများစွာသောအခက်အခဲတွေ့လိမ့်မည်, ကျနော်တို့စာရေးဆရာများမဟုတ် Rikoooo ထံမှထောက်ခံမှုကိုတောင်းဆိုကြဘူးပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
ချက်ချင်းထမှတ်ချက်, သင်မဟုတ်ရင်, ပျံသန်းဖို့မဆိုကြိုးပမ်းမှုရှေ့တော်၌ထို Joystick ကို set up ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, သင့်လေယာဉ်အလိုတော်နှာခေါင်း။ ဒီ link ကနေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလိုက်နာ (သင် install လုပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ပြီးသား Rikoooo ရဲ့ Auto-installer ကိုပြုင့်) https://flightinstructoronline.wordpress.com/2018/06/10/tu-144-in-fsx/
အဆိုပါ Tupolev Tu-144 (နေတိုး ဟူ. အမည်ပေးထားပြီး: Load) ကို Tupolev ဒီဇိုင်းကိုရုံးကဆိုဗီယက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးလေးအင်ဂျင်အသံထက်မြန်လေယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Anglo-ပြင်သစ် Concorde နှင့်အတူ, သူတို့ထုတ်လုပ်မှုရောက်ရှိကြဖို့သာအသံထက်မြန်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်တင်ဖြစ်ကြသည်။ Aeroflot ၏လိုင်းများပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် Mach2နှင့်ဗားရှင်းပေါ် မူတည်. 20,000 65,500-98 120 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကျော်ခရီးသည်3မှ 080 ထံမှ6မီတာ (200 ပေ) ၏အမြင့်, ကျော်လွန်နေတဲ့မြန်နှုန်းမှာသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ (ဝီကီပီးဒီးယား)
Author: သောမတ်စ်ရုသ် Claudio Mussner, Nikita Konstantinov နဲ့ Mikhail Mitin က Igor Borozdin, Frion